Patrick Bamford ayaa rajeynaya inuu ka ciyaari karo xulkiisa England ee Euro 2020 ka dib markii uu hal gool dhaliyay mid kalena dhigay madaama Leeds ay garaacday Fulham. - Wardeeq 24 TV Patrick Bamford ayaa rajeynaya inuu ka ciyaari karo xulkiisa England ee Euro 2020 ka dib markii uu hal gool dhaliyay mid kalena dhigay madaama Leeds ay garaacday Fulham. Wardeeq 24 TV
Home Sports-ka Patrick Bamford ayaa rajeynaya inuu ka ciyaari karo xulkiisa England ee Euro...
Patrick Bamford ayaa rajeynaya inuu ka ciyaari karo xulkiisa England ee Euro 2020 ka dib markii uu hal gool dhaliyay mid kalena dhigay madaama Leeds ay garaacday Fulham.
Ciyaarta ayaa timid maalin kadib markii Bamford laga reebay xulka Gareth Southgate ee kulamadii ugu horeeyay ee is reeb-reebka koobka adduunka.
Fulham, ayaa lumisay fursad ay uga guuri laheyd heerka labaad ee heerka labaad ee Premier League iyadoo guuldaradii seddexaad ay soo gaartay afar kulan.
Leeds labo gool ayaa la diiday qeybtii hore – markii hore markii madaxa Luke Ayling uu diiday caawiyaha fiidiyowga ee fiidiyoowga ah iyo ka dib markii Raphinha uu offside fiican ku jiray ka hor inta uusan shabaqa gelin.
Waxay hogaaminayeen markii Bamford uu ku jajabiyey guriga birta dhow ee iskutallaabta Jack Harrison.
Fulham ayaa barbareysay markii daafaca Joachim Andersen uu kubad ka helay koornada Ademola Lookman, goolkiisii ​​ugu horeeyay ee kubada cagta Ingariiska.
Laakiin Leeds ayaa goolka guusha dhalisay wax yar ka hor saacadda, iyadoo Bamford uu quudiyay Raphinha, kaasoo garaacay labo daafac ka hor inta uusan gurigiisa shabaqa gaarin.
“Kaliya waxaan u baahanahay inaan sii wado shaqada oo aan arko haddii aan magacayga ku heli karo tartamada Euro,” Bamford ayaa u sheegay Sky Sports. “Haddii aan kusii socdo sida aan ahay waxaan u maleynayaa inaan la socdo xabad. Haddii aad ii sheegto bilowga xilli ciyaareedka waxaa ila xiriiri doonaa England, waxaan dhihi lahaa waxaad tihiin kuwo baangado ah
“Hadday timaaddo, way timaaddaa. Haddii kalese, waan ogahay inaan sameeyay intii karaankeyga ah. Waxay ku jirtay dhabarka maskaxdayda wax yar oo aan qiyaasayo. Waxay kaa siinaysaa xoogaa dab dheeraad ah calooshaada.”
Natiijada ayaa ka dhigeysa in kooxda Marcelo Bielsa ee Leeds ay ku jirto kaalinta 11-aad ee kala sareynta horyaalka 39 dhibcood.
Falcelintii guushii Leeds ee Fulham
Bamford wuxuu ka caawiyaa Leeds inay fududeeyso dhibaatooyinka dhibcaha
Previous articleGlen Kamara wuxuu leeyahay Ondrej Kudela cunsuriyada diidmada ‘been iyo gebi ahaanba been ah
Next articleWaa Maxay Macanka Ama Sonkorowga Su’aalo iyo jawaabo caam ah